Madaxweynaha Galmudug oo ‘laamaha amniga’ faray in la xiro xudduudaha Galmudug – HalQaran.com
Madaxweynaha Galmudug, Qoorqoor
Galmudug (Halqaran.com) – Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) ayaa dhammaan ugu baaqay bulshadda deegaanada maamulka Galmudug in ay muujiyaan feejignaan dheeri ah oo ku saabsan ka hortagga Cudurka Coronavirus.
Mr. Qoorqoor ayaa sheegay in dhammaan Bulshada deegaanada Galmudug uu ugu baaqayo in ay yareynyaan Kulamada ay isku imaanayaan, maadaama Fayraska Corona uu dalka dhibaato ku hayo.
Qoorqoor ayaa amar ku bixiyay in la xiro Xuduudaha Galmudug si looga hortaggo Cudurka Coronavirus.
‘‘Waxaan farayaa laamaha amniga in ay xiraan Xuduudaha Galmudug ay la wadaagto itoobiya, waxaan joojinay jaadka mana aqbaleyno in hubinta caafimaadka la sahlado.” ayuu yiri Madaxweyne Qoor Qoor.
Madaxweynaha Galmudug ayaa ka dalbaday Shaqaallaha Caafimaadka Galmudug in ay galaan heegan buuxa, islamarkaana ay ka shaqeyn doonaan sidii loo yareyn lahaa waxyeeladda Cudurka.
Tags: Madaxweynaha Galmudug oo laamaha amniga faray inay xiraan xuduudaha Galmudug
Maxaa ka jira in dowladda Kenya ay xirtay Suuqa Soomaalida Nairobi ee Islii?